Dad badan oo halkii mushaarka ka doorta xannaaneynta eheladooda waayeelka ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dad badan oo halkii mushaarka ka doorta xannaaneynta eheladooda waayeelka ah
La daabacay tisdag 7 januari 2014 kl 16.16
Maadaama ay waayeel badani boos ka helin goobaha xannaanada waayeelka ayey ehelo badan khasab ku noqotaa in ay isku mashquuliyaan xannaaneynta waayeelka ay ehelka yihiin. Daraasad cilmi-baaris ah oo dhoowaan soo baxday ayaa lagu muujiyey in boqolkiiba 42 % dadka da'doodu meel dhexaadka tahay ay ugu yaraan bishiiba hal mar xannaano u fidiyaan eheladooda waayeelka ah.
Khubarada baaritaanka sameysey waxay muujiyeen in dadka da'doodu dhexdhexaadka oo eheladoodu xannaanada ay 90 000 dumar yihiin, halka ay 50 000 rag ka yihiin. Dadkaas ayaa yareeya saacadaha ay shaqeeyaan amase shadaba isaga taga si ay u xannaaneeyaan eheladooda waayeelka ah. Khubaradani waxay qabaan in ay sidaas awgeed habboon tahay in xannaanada waayeelka loo arko in ay muhiim u tahay sida xannaanada carruurta.
Waxaa intaas dheer in ay khubaradu muujisey in ay saameynta ay arrintani leedahay ay haweenka kaga badan tahay ragga. Dumar gaaraya 114 000 oo qof oo da'doodu dhexdhexaad tahay ayaa mushaarooyinku yaraadeen xannaanada waayeelka ehelka ah awgeed. Ragga mushaarooyinkoodu isdhimeen xannaanada waayeelka ehelada ah awgeed waxay iyadguna dhammaayeen 75 000 oo qof. Dumarka xannaanada waayeelka awgeed jirrada isugu qoray waxay labajibbar ka badnaayeen ragga. Saddex meelood oo meel dumarka maalin walba xannaaneeya waayeelka ay ehelka yihiin waxay dareensan yihiin culeys xagga maskaxda ah, kuwo kale oo dumarkaas ka mid ahna waxaa ku adag in ay haleelaan nolosha qoyska iyo la kulanka asaxaabta.